ကိုဗစ် (၁၉) ကူးစက်ရောဂါအရေးပေါ်ကာလအတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မူပေးခဲ့သောကျန်းမာ ရေး၀န်ထမ်းများအားဗာတီကန်မှကျေးဇူးတုန့်ပြန်
ပင်တီကော့စ် ပွဲနေ့ကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ၏ ထူးခြားသော ကွဲပြားခြားနားမှုကို စိန်ခေါ်...
သခင်ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ အမှန်တကယ်ရှိခဲ့လျှင် အဘယ့်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အာဖရိကနိုင်ငံ၌ ခရစ် ယာန်ခေါင်းဆောင်များသည် ဩဇာအာဏာများ ပိုင်ဆိုင်နေကြပြီး လူများမှာမူ အဖတ်ဆယ်၍ မရအောင်မွဲတေသောဘဝကို ရှင်သန်ရပါသနည်း?
Fr. Enobong Paulinus U doiding -Rome, Italy
လူသားအားလုံးတန်းတူပြောနိုင်သည့် စကားသည် မည်သည့်ဘာသာစကားဖြစ်သနည်း?..
လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းကိုလက်မခံနိုင်။ သို့သော်အကြမ်းမဖက်ဘဲကိုင်တွယ်ရန် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမေတ္တာရပ်ခံ
သနားတတ်သော၊ လူ့ဘ၀ကိုနှောကျေသောအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပါ’ ဟုသုံးပါးသစွာရှင်သီလရှင်များကို ရဟန်းမင်းကြီးတိုက်တွန်း
ယခုနှစ်သည် သုံးပါးသစ္စာဖြင့်မိမိတို့၏ဘ၀ကိုဘုရားသခင်၏အမှုတော်မြတ်အတွက်ဆက်ကပ် ရှင် သန်သောသီလရှင်များ၏ကျင့်၀တ် များပြန်လည်ဖြည့်စွက်ခဲ့သောနှစ် (၅၀) ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ် သည်။ ထိုနှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုအမှုးပြု၍ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ကသီလရှင်များ အားအောက်ပါဩဝါဒကို မြွတ်ကြားခဲ့သည်။
၄င်းတို့၏ခေါ်တော်မူခြင်းသည် ‘မျှော်လင့်ခြင်း၏အမှတ်သင်္ကေတ’ ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကက်သလစ်အသင်းတော်မှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့မှလှုပ်ရှား
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် ထုတ်ဝေခဲ့သောစာချွန်တော် ၅ နှစ်ပြည့်ထိမ်းအမှတ် ဖြစ်သည့် 'Laudato Si' နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အတွက် ဖိလစ်ပိုင်ကက်သလစ်အသင်းတော်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေသော၊ အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော လုပ်ငန်း၊ လုပ်ရပ်များကိုတားစီးရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
"ဆုတောင်းခြင်းသည် ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း၏ ပန်းပွင့်များကို ပျိုးထောင်ပေးသည်။"
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး အရှင်သူမြတ်သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ လူထုပရိတ်သတ်တွေ့ဆုံရာနေရာမှာ ယုံကြည်သူများအား "ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်အသက်တာ၌ နတ်ဆိုး၏ နှောင့်ယှက်ခြင်းများ တွေ့ကြုံနေရသော်လည်း လူ့သဘောသဘာဝနှင့်
စပ်လျှင်း၍ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်သည် ကောင်းကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်သည်။" ဟု မြွတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
ရဟန်းမင်းကြီးသည် လိုင်းမှစောင့်ကြည့်နေကြသောလူထောင်သောင်းနှင့်အတူစ​ေဝေး၍ ကိုဗစ် (၁၉) ကူးစက်ရောအမြန်ဆုံးကင်းဝေးစေရန်မယ်တော်၏ထပ်ဆင့်ဆုတောင်းပေးခြင်း ကိုတောင်းခံခဲ့သည်။
ရဟန်းမင်းကြီးသည် ဘုရားဖူး (၁၃၀) ခန့်လောက်ဖြင့် ဗာတီကန် ဥယျာဉ်အတွင်း ၌တည်ဆောက်ထားသောလုဒ်မယ်ဂူဆုတောင်းခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ဆုတောင်းနေစဉ် ကမ္ဘာ တစ်၀န်းမှမယ်တော့်ဆင်း တုတော်၊ ပုံတော်များတီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။
ကိုဗစ် (၁၉) ကြောင့်ကိုယ်တော်မြတ်မုန့်များကိုလည်းသိုလှောင်ထားရ
စိန့်စီစီးလျာသီလရှင်ရသေ့ကျောင်း ၌သီတင်းသုံးနေသောရသေ့သီလရှင်များမှာဘက်နက်ဒင်တင်းသီလရှင်များဖြစ်သည်။ ဤရသေ့ကျောင်းသည်အင်္ဂလိပ်တူးမြောင်း ၌ရှိသော Weight ကျွန်းငယ်လေး တွင်သီတင်းသုံးနေကြသည်။ သူတို့သည်မစ္ဆားတရားပူဇော်ခြင်း၌အသုံးပြုသည့်ကိုယ်တော်မြတ်မုန့်ကို ဖုတ်ရောင်းလေ့ရှိသည်။